Warar - 10 nooc oo cusbi ah iyo codsi
Si aad ugu fiicnaato naqshadeynta iyo soo saarista alaabada caagga ah, waa inaan fahanno noocyada iyo isticmaalka balaastigga.
Caaggu waa nooc ka mid ah isku-jirka molecule sare (macrolecules) kaas oo lagu polymerized by isku-darka polymerization ama falcelinta polycondensation la monomer sida wax cayriin. Waxaa jira noocyo badan oo balaastig ah oo leh sifooyin kala duwan, laakiin way fududahay in miisaan khafiif ah yeesho, fududahay sameynta, fududaanta helitaanka alaabta ceeriin iyo qiimo jaban, gaar ahaan iska caabinta daxalka u fiican, kuleylka iyo ilaalinta kuleylka, saamaynta guryaha iska caabinta loo adeegsaday warshadaha iyo nolosha aadanaha.
(1) Qaybaha ugu muhiimsan ee alaabada ceeriin ee balaastigga ah waa polymer matrix loo yaqaan "resin".
(2) Caaggu wuxuu leeyahay kuleyliyaha wanaagsan ee korantada, kuleylka iyo codka: dahaadhka korantada, iska caabinta qaansada, ilaalinta kuleylka, kuleylka kuleylka, nuugista codka, nuugista gariirka, waxqabadka yareynta buuqa.
(3), habsami u socodka, iyada oo loo marayo wax taaj oo kale duritaanka, ayaa laga samayn karaa alaabooyin leh qaab isku dhafan, cabir deggan oo tayo wanaagsan leh waqti aad u gaaban.
(4) Qalabka ceyriinka ah ee caaga ah: waa nooc ka mid ah walxaha polymer-ka loo yaqaan (polymer) oo ah qeybta ugu weyn, kuna dhex milmeysa walxaha kaabayaasha kala duwan ama qaar ka mid ah waxyaabaha lagu daro isticmaalka gaarka ah, leh baaxad iyo dheecaan ka hooseeya heerkulka iyo cadaadiska gaarka ah, oo noqon kara loo qaabeeyey qaab cayiman isla markaana qaabku u ahaanayaa mid aan isbeddelin xaaladaha qaarkood ..
Kala soocida balaastikada
Marka loo eego qaab dhismeedka meerkulka ee cusbada dardaaranka ah, alaabada ceyriinka ah ee balaastigga ah waxaa inta badan ku jira balaastikada 'thermoplastic' iyo 'plastics thermosetting': loogu talagalay balaastikada 'thermoplastic plastics', qalabka caaga ah ee weli caagga ah ka dib kuleylka soo noqnoqda badanaa waa PE / PP / PVC / PS / ABS / PMMA / POM / PC / PA iyo alaabada kale ee cayriin ee guud. Balaastiigga kuleylka ayaa badanaa loola jeedaa balaastigga lagu sameeyo kuleylka iyo adkaynta cusbada dardaaranka ah, sida qaar ka mid ah caagagga phenolic iyo caagga amino. Polymer wuxuu ka kooban yahay molecules badan oo yar yar oo fudud (monomer) by isku xirnaanta isku xirnaanta.
1. Kala soocida iyadoo loo eegayo astaamaha cusbada inta lagu jiro kuleylka iyo qaboojinta
(1) Balaastikada 'Thermoset': kululaynta ka dib, qaab dhismeedka moodeelka ayaa lagu dari doonaa qaab shabakad ah. Marka lagu daro polymer network,
ma jilcin doonto xitaa ka dib marka la kululeeyo, iyadoo la muujinayo waxa loogu yeero [isbeddelka aan laga noqon karin], oo ay sababtay isbeddelka qaab dhismeedka kelli (kiimikada isbeddelka)
(2), thermoplastics: waxaa loola jeedaa balaastigga dhalaali doona ka dib kuleylka, u qulqulaya caaryada qaboojinta iyo sameynta, ka dibna dhalaalaya ka dib kululeynta. Waa la kululeyn karaa oo la qaboojin karaa si loo soo saaro [isbeddel lagu beddeli karo] (dareere ← → adag), oo ah waxa loogu yeero isbeddelka jirka.
A. Balaastik guud: ABS, PVC.PS.PE
B. Bacaha injineernimada guud: PA.PC, PBT, POM, PET
C. Caagagga injineernimada Super: PPS. LCP
Marka la eego baaxadda dalabka, waxaa jira inta badan balaastigyada guud sida PE / PP / PVC / PS iyo caagagga injineernimada sida ABS / POM / PC / PA. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qaar ka mid ah balaastikada gaarka ah, sida heerkulka sare iyo u adkeysiga qoyaanka, iska caabinta daxalka iyo caagagga kale ee loo beddelay ujeedooyin gaar ah.
2. Kala soocista iyadoo la isticmaalayo balaastikada
(1) Bacaha guud waa nooc balaastig ah oo si ballaaran loo isticmaalo. Wax soo saarkiisu waa weyn yahay, wuxuuna xisaabiyaa qiyaastii seddex meelood meel wadarta wax soo saarka balaastigga, qiimihiisuna wuu hooseeyaa. Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa in laga sameeyo waxyaabaha daruuriga ah ee maalin kasta iyadoo culeys yar la qabo, sida qolof TV, qolof taleefan, weel caag ah, foosto balaastik, iwm. Wuxuu xiriir aad u dhow la leeyahay dadka wuxuuna noqday tiir muhiim u ah warshadaha balaastigga ah. Caagagga guud ee la isticmaalo ayaa ah PE, PVC, PS, PP, PF, UF, MF, iwm.
(2) Balaastikada injineernimada In kasta oo qiimaha balaastigga guud hooseeyo, astaamaheeda farsamo, caabbinta heerkulka iyo u adkaysiga daxalka way adagtahay in la daboolo baahiyaha qalabka dhismaha qaab dhismeedka injineernimada iyo qalabka qaarkood. Sidaa darteed, caagagga injineernimada ayaa yimid. Waxay leedahay xoog farsamo iyo qalafsanaan, waxay beddeli kartaa qaar ka mid ah birta ama waxyaabaha aan birta ahayn, waxayna soo saari kartaa qaybo farsamo ama qaybo walaac injineernimo leh qaab dhismeed adag, qaar badan oo ka waxtar badan kuwa asalka ah Caagagga injineernimada guud waa PA, ABS, PSF, PTFE, POM iyo PC.
(3) Qalabka ceyriinka ah ee khaaska ah, oo leh shaqooyin gaar ah, ayaa loo isticmaali karaa mararka qaarkood qaaska ah, sida balaastigyada sameeya magnetic, balaastigga ionomer, caaga pearlescent, caagagga sawir qaadashada leh, caagagga caafimaadka, iwm.
Codsiga 10 nooc oo caag ah:
1. Bacaha guud
(1) .PP (polypropylene): gubashadu waxay leedahay urta batroolka, midabka asalka ololku waa buluug; biyo sabayn.
Homopolymer PP: translucent, ololi kara, sawir silig, qalabka korontada, guddiga, wax soo saarka maalinlaha ah.
Isku-darka PP-ga: midabka dabiiciga ah, ololi kara, qalabka korontada, qalabka guryaha lagu isticmaalo, weelasha.
Kala-sooc la'aanta 'PP copolymerization PP': mid aad u hufan, ololaya, qalab caafimaad, weelasha cuntada, wax soo saarka baakadaha
(2) .ABS (polystyrene butadiene propylene copolymer): dhalaalka dhalaalaya, qiiqa gubanaya, dhadhanka udgoon; biyaha quusin
Qalabka ceeriin ee ABS: adkaanta sare iyo xoogga, ololaya; qolof koronto, saxan, qalab, qalab
Wax ka beddelka ABS: kordhi qalafsanaanta iyo ololka, olol ma leh; qaybaha baabuurta, qaybaha korantada
(3) .PVC (polyvinyl chloride): urta gubida koloriin, cagaar dabka hoostiisa; biyaha quusin
PVC adag: xoog iyo adkaansho, olol celin; qalabka dhismaha, tuubooyin
PVC jilicsan: dabacsan oo si fudud loo farsameeyo, way adag tahay in la gubo; alaabta lagu ciyaaro, farshaxanno, dahabka
2. Caaga injineernimada
(1) .PC (polycarbonate): olol huruud ah, qiiq madow, dhadhan gaar ah, biyo hoosaad; adag, hufnaan sare, olol-celin; dijitaalka gacanta, CD, hogaaminaya, baahiyaha maalinlaha ah
(2) .PC / ABS (daawaha): udgoon gaar ah, qiiq madow oo madow, biyo hoosaad ah; adkaansho adag, cad, olol celin; qalabka korontada, kiiska qalabka, qalabka isgaarsiinta
(3) .PA (polyamide PA6, PA66): dabeecadda oo gaabisa, qiiqa huruudda ah, ur timo gubanaya; adkeyn, xoog sare, olol celin; qalabka, qaybaha farsamada, qaybaha korantada
. adkaanta, xoogga sare, ololaya; qalab, qaybo farsamo
(5) .PMMA (polymethyl methacrylate); dhadhan khafiif ah oo khaas ah: gudbinta iftiinka sare; plexiglass, farsamada gacanta, qurxinta, baakadaha, u hogaansanaanta filimka
3. Elastomer caag ah
(1) .TPU (polyurethane): dhadhan gaar ah; dabacsanaan wanaagsan, adkeyn iyo xirashada iska caabin, ololi kara; qaybaha farsamada, qaybaha elektarooniga ah
(2) .TPE: udgoon gaar ah, olol hurdi; SEBS wax laga beddelay, adkaanshaha jirka oo la hagaajin karo, hanti kiimiko fiican leh, ololi kara; alaabta carruurtu ku ciyaaraan, gacan-qaadista duritaanka labaad, boorsooyinka gacanta lagu qaato, fiilooyinka, qaybaha baabuurta, qalabka isboortiga.
Waxaa jira afar nooc oo tiknoolajiyad wax lagu shaabadeeyo oo caag ah: wax isku duro oo la isku duro, wax taaj oo kale ah oo la dubo, caaryada la isku qurxiyo iyo wax taaj oo kale ah. Wax taaj oo kale duray waa habka ugu weyn ee lagu helo qaab dhismeedka adag iyo qaybo caag size sax. Wax soo saarka duritaanka waxay ubaahantahay in lagu tiirsanaado sedex shey oo ah caaryada la isku duro, mashiinka irbadda iyo walxo cayriin caag ah si loo dhameystiro nidaamka.Mestech waxay diiradda saaraysaa wax soo saarka caaryada cirbadaha caagagga ah iyo qaybaha balaastigga ah ee wax ka sameysta in ka badan 10 sano, waxayna soo aruurisay tikniyoolajiyad iyo waayo-aragnimo hodan ah. Waxaan u heellan nahay inaan ku siino wax soo saarka caaryada iyo adeegyada wax ka sameynta caagagga, fadlan nala soo xiriir.